I-NASA yokuQaliswa kweSithuba: nge-8 kaDec
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuqaliswa kwe-NASA ye-Space: Dec. 8 - Indawo yokubukela
I-Roscosmos cosmonaut u-Alexander Misurkin uya kujoyina abathathi-nxaxheba kwi-spaceflight u-Yusaku Maezawa kunye no-Yozo Hirano kwisiphekepheke se-Soyuz MS-20 esivela e-Baikonur Cosmodrome e-Kazakhstan ngo-2: 38 am EST ngoLwesithathu, Dec. 8 (12:38 pm ixesha le-Baikonur). Ukwazisa, ukumisa, kunye nokubuyisela imisebenzi iya kuboniswa ngqo kwi-NASA Television, i-app ye-NASA, kunye newebhusayithi ye-arhente.
Emva kohambo oluyi-obhithi ezine, uhambo lweeyure ezintandathu, iSoyuz iya kumisa kwimodyuli yesikhululo iPoisk ngo-8:41 kusasa Malunga neeyure ezimbini emva kokumiswa kwenqanawa, kuya kuvuleka iindawo zokuqandusela phakathi kweSoyuz nesikhululo kwaye abasebenzi baya kubulisana.
Kanye kwisikhululo, i-trio iya kujoyina i-Expedition 66 Commander Anton Shkaplerov kunye ne-cosmonaut uPyotr Dubrov waseRoscosmos, kunye nosomajukujuku beNASA uMark Vande Hei, uRaja Chari, uTom Marshburn, kunye noKayla Barron, kunye ne-ESA (i-European Space Agency) i-astronaut Matthias Maurer, malunga neentsuku ezili-12 kwilebhu ye-orbital.
NgeCawa, Dec. 19, uMisurkin, Maezawa, kunye noHirano baya kuwugqiba umsebenzi wabo, bekhulula iSoyuz kwimodyuli yePoisk ngaphambi kokuya kwindawo encediswa yiparashute kwithambeka laseKazakhstan ngo-10:18 pm EST (9:18 am ngoMvulo). , Disemba 20, ixesha laseKazakhstan).
Ubuthunywa buhamba ngolu hlobo lulandelayo (ngamaxesha onke eMpuma):
NgoLwesithathu, uDisemba 8
2 am-i-NASA TV coverage iqala ngo-2:38 kusasa.
Intsimbi yesi-8 kusasa-iTV ye-NASA iqala ngo-8:41 kusasa.
10:15 am-i-NASA TV coverage iqala ngokuvulwa kwehatch kunye namazwi amkelekileyo.
NgeCawa, nge-19 kaDec
Intsimbi yesi-3 emva kwemini-i-NASA TV coverage iqala ngokuvalwa kwentsimbi yesi-3:32 emva kwemini
6:30 pm-ITV yeNASA iqala ukukhutshwa ngo-6:54 ebusuku
Intsimbi yesi-9:10-I-NASA iqala ukugubungela umabonwakude kunye nokuhla. Ukuma kujoliswe ngo-18:XNUMX pm
Le iya kuba yinqwelomoya yesithathu kaMisurkin esithubeni kunye nenqwelomoya yokuqala kaMaezawa kunye noMirano, abenza uhambo lwabo emajukujukwini phantsi kwekhontrakthi phakathi kwe-Space Adventures kunye neRoscosmos.